Maxay ka dhigan tahay Miisaaniyadda Madaxweynuhu soo jeediyay ee Cunnooyinka Shaagagga? - Cuntooyinka giraangiraha
Maxay uga dhigan tahay miisaaniyadda uu soo jeediyay Madaxweynaha Cunnada Lugaha Lugta?
Ka dib markii Madaxweyne Trump u diray miisaaniyadda naqshadeynta Sannad-maaliyadeedka 2018-ka Koongaraska, waxaa si sax ah u jiray walaac ku saabsan Cuntooyinka bulshada ee ku saabsan dhimista maalgalinta barnaamijyada maxalliga ah. Waxaa inagu dhiirigaliyay cunno badan oo taageerayaasha Wheels ah waqtigan waxaanan jecelahay inaan ka faa'iideysto fursadan si aan uga jawaabno dhowr su'aalood oo aad ka qabtid oo ku saabsan saameynta ay ku yeelan karto miisaaniyadda la soo jeediyey Madaxweynaha barnaamijyada maxalliga ah.
Miyaan ka walwalsanaan karaa howlaha Cuntada ee Wheels-ka oo aniga ama qof aan jeclahay la joojiyo?
Metro Meals on Wheels waxay rabtaa inay u xaqiijiso dadka cuntada qaata iyo kuwa ay jecel yihiin in adeeggu u sii socon doono sidii caadiga ahayd. Waxaan sidoo kale ku dhiirrigalin lahayn qof kasta oo u maleynaya inay ka faa'iideysan karaan Cunnooyinka Gawaarida iska qor khadka ama naga soo wac 612-623-3363.
Marka lagu daro maalgelinta federaalka, barnaamijyada Cunnada ee Wilayaashu waxay ku tiirsan yihiin taageerada ka timaadda dawladaha hoose iyo gobolka, iyo tan ugu muhiimsan deeqaha ka yimaada shakhsiyaadka iyo aasaaska samafalka. Caawimaaddaada, waxaan sii wadi doonnaa inaan sameyno wax walba oo karaankeenna ah si aan u hubinno dadka u baahan Cunnooyinka Lugaha Laydhka inay galaan barnaamijka.
Maxay uga dhigan tahay miisaaniyaddan la soo bandhigay cunnooyinka maxalliga ah ee maalgelinta Gawaarida?
Maalgelinta gaarka ah ee laxiriirta Cunnooyinka Dufanada ee miisaaniyada uu soojeediyay Madaxweynaha waxaa lagu darayaa barnaamijka Deeqda Horumarinta Bulshada (CDBG). Miisaaniyadda la soo jeediyay waxay meesha ka saari doontaa maalgelinta CDBG ee gobollada si loogu isticmaalo barnaamijyo kala duwan, oo ay ku jiraan barnaamijyada nafaqada ee waayeelka ah iyo cunnooyinka guryaha lagu keeno.
Go'aamada maalgelinta CDBG waxaa lagu sameeyaa gudaha. Aagagga Twin Cities, ururo badan oo bulshada ka tirsan ayaa ka hesha maaliyad CDBG si loogu kabo adeegyada ay bulshada u qabtaan, oo ay ku jiraan Cuntooyinka Lugaha. Goynta kasta ee barnaamijkan waxay saameyn ku yeelan doontaa dhammaanteen oo ay ku jiraan, si toos ah ama si dadban, Barnaamijyada Cunnada ee Wheels iyo dadka waaweyn ee nugul ee aan u adeegno.
Miisaaniyadda uu Madaxweynuhu soo jeediyay macnaheedu ma tahay dhimista oo soo dhow.
Tani waa soo jeedin miisaaniyadeed oo hordhac ah, laakiin Koongarasku wuxuu hayaa awooda ugu dambeysa ee ansixinta miisaaniyada Sanadka Maaliyadeed ee 2018. Xilliga ay dadka waaweyni si xawli ah u korayaan - dadka waayeelka ah ee ku nool magaalooyinka mataanaha ah ayaa laba jibaarmi doona sanadka 2040 - waxaan aaminsanahay jarista ilaha adeegyada lagama maarmaanka ah waa qaab qaldan.
Metro Meals on Wheels ayaa sii wadi doonta inay la shaqeyso saraakiisha aan dooranay si loo hubiyo inay fahmaan muhiimadda adeegyadayada ay u leeyihiin waayeelka iyo dadka naafada ah ee ku nool magaalooyinka mataanaha ah iyo dhammaan Minnesota.
Maxaan sameyn karaa si aan u taageero Cuntada Lugaha Lugta xilligan?
La xiriir saraakiisha aad dooratay
Haddii aad ka walaacsan tahay dhimista la soo jeediyey ee miisaaniyadda Madaxweynaha, u ogeysii wakiilladaada Koongareeska in maalgelinta CDBG ee loogu talagalay barnaamijyada sida Cunnooyinka Gawaarida ay muhiim u yihiin hubinta fayoobaanta deriskeenna sare. Halkan ka ogow cidda ku metelaysa.
Iskaa wax u qabso ama tabaruca
Ku deeqa shaqsiyaadka iyo tabaruceyaasha ayaa ah ilaha ugu muhiimsan ee aan ka bixin karno adeegyada waayeelka aan u adeegno. Waxbadan ka baro tabarucida ee loogu talagalay Cunnooyinka Gawaarida ama tabaruc samayso si aan u taageerno Cunnooyinka Cagaf ee bulshadayada.